नगरप्रमुख नेपालीले बनाईदिए तुरतुरे पीडितको घर : दुई एकल महिलाको घर जस्तापाताले छाईदिने उद्घोष ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण ११, शनिबार २१:४३	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
सुमन सुनार, बुर्तिबाङ २०७६ साउन ११ । तुरतुरे पहिरोका डुवान पिडितले ११ महिना पछि आफ्नै घरमा बस्न पाउने भएका छन् । गत २०७५ भाद्र २९ गते राती ढोरपाटन नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने तुरतुरे देउरालीमा गएको भिषण पहिरोले बडिगाड खोला थुनिदा घर घोठ डुवानमा परी घरबास विहिन बनेका सिमलचौरका डुवान पिडितको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीले व्यक्तिगत लगानीमा घर निर्माण गरिदिएपछि आफ्नै घरमा बस्न पाउने भएका हुन् ।
पहिरोले बडिगाड खोला थुनिदा ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. २ सिमलचौरका देविराम कुमाल र कृष्ण बहादुर कुमालको दुई तले घर गोठ डुवानमा परेको थियो । यस्तै सोही स्थानका चुडाबहादुर कुमालको गोठमा रहेका ३ वटा गोरु गोठमा बाँधेको अवस्थामा डुवेका थिए भने एउटा पोल्ट्री फर्म समेत डुवानमा परेको थियो । अर्का रामबहादुर कुमालको गोठ डुवानमा परेको थियो ।
पुर्ण रुपमा घर गोठ डुवानमा परी घरबास विहीन बनेका २ घर परिवारको नगर प्रमुख नेपालीले रु. ७ लाखको लगानीमा २ तले घर निर्माण गरिदिएका हुन । त्यसैगरी गोठ डुवानमा परेका २ घर परिवार पीडितहरुको भने नगर प्रमुख नेपालीले रंगीन जस्तापाताले घर छाइदिएका छन् ।
घर, गोठ डुवानमा परेपछि करिव ११ महिना देखि आफन्तको आश्रय लिएर बस्दै आएका डुवान पीडितले आफ्नै घर पाएपछि हष्तिि भएका छन् । डुवान पीडित मन कुमारी कुमालले मेरो घर, खेतबारी सबै डुवानमा प¥यो, खाने गास पनि भएन, बस्ने बास पनि भएन, कहिले दिदी र भान्जीको घरमा, कहिले अरु आफन्तहरुकोमा आश्रय लिएर अहिले सम्म बस्दै आएकी थिँए । अहिले करिव १० दिन भयो मेयर साहवले बनाईदिएको घरमा बस्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले श्रीमान बैदेशिक रोजगारमा गएको बताउँदै घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेपनि तत्काल घर बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, नगर प्रमुखले आफ्नौ घर निर्माण गरिदिएपछि आफुलाई निकै खुशी लागेको बताईन् ।
त्यस्तै अर्का डुवान पीडित कृष्ण बहादुर कुमालले पहिरो गएपछि बनेको ताल हेर्न र मनोरञ्जन लिन धेरै आएको तर कसैले सहयोग नगरेको बताए । ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुखले भने आफुले गरेको बाचा अनुसार नै घर बनाइदिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
करिव ३ महिनाको समय लगाएर डुवान पीडितको घर निर्माण गरिएको र एक घर बराबर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत लागेको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेपालीले बताए ।
यसैविच नगर प्रमुख नेपालीले पीडितहरुको नयाँ बनेको घरको स्थलगत अवलोकनका क्रममो पीडितहरुसंग कुराकानी गर्दै आफुले जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । उनले झुठ्ठा आश्वासन बाँडेर राजनिति गर्ने, जनतालाई भ¥याङ बनाएर माथी पुग्ने, तर जनताको हितमा काम नगर्ने प्रबृतिले गरिव दुःखी जनता सधै पछि परेको भन्दै अवका दिनमा त्यस्ता तत्वहरुबाट सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । जस्तोसुकै परिस्थीतीमा पनि आफु जनताको साथमा रहेको भन्दै अब कसैले एक्लो महसूस गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो । ढोरपाटन नगरपालिकाले नगरपालिकालाई खरको छानोमुक्त बनाउने निति तथा कार्यक्रम लिएको भन्दै नगर प्रमुख नेपालीले छिटै खरको छानो भएका हरेकको घर जस्ता पाताले छाइने समेत बताए ।
सोही अवसरमा नगर प्रमुख नेपालीले सिमलचौरका २ जना एकल महिलाको खरको छानो भएको घरलाई जस्ता पाताले छाइदिने घोषणा गरे । स्थानिय देउकुमारी कुमाल, फुलमती कुमालको घर व्यक्तिगत लगानीमा रंगीन जस्ताले छाइदिने घोषणा गरेका हुन ।
अवलोकन कार्यक्रममा नगर प्रमुख नेपाली सहित बागलुङ उद्योग बाणिज्यसंघ ईकाई समिति बुर्तिबाङका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेता टंक पौडेल, रुद्र पौडेल लगायत स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी, पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
गत वर्ष मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै पहाड खसेर बडिगाड खोला थुनिएर करिव १ किलोमिटर सम्मको दूरी माथी सम्म अहिले पनि नदीको ताल बनेको अवस्था छ । खोला थुनिएर बनेको उक्त तुरतुरे ताल पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको लागि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । उक्त तालमा जलयात्रा (-याफ्टिङ) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो ताल अवलोकनको लागि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लागेपछि ढोरपाटन नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा त्यहाँका स्थानियले जलयात्रा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।